दसैँ र भिडभाड : बाध्यता कि लापरबाही ? - Laltin.com
दसैँ र भिडभाड : बाध्यता कि लापरबाही ?
दसैँ नजिकिए सगैँ काठमाडौँका बिभिन्न स्थानहरुमा किनमेलका लागि सर्वसाधारणहरुको चहलपहलमा वृद्धि भएको छ । अधिकांस होटल, बजार, पसलहरु भरी भराउ हुने गरेका छन् । न्यूरोड, जमल, लगनखेल लगायतका स्थानहरुमा किनमेलका लागि भिड हुने गरेको छ ।
यसबीच कोभिडको जोखिम भने यथावत नै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विज्ञप्ति जारी गर्न बाहेक कुनै ठोस कदम चालेको दैखिदैन । जारी भएका आदेशहरुको कार्यान्वयनमा कुनै पनि निकाय सक्रिय भएको देखिदैन । सम्बन्धित निकायहरुको लापर्बाहीले अनावश्यक भिडभाडहरुमा नियत्रण हुन नसक्दा भविश्यमा ठूलै भवितव्य नआउला भन्न सकिन्न ।
छिमेकी राष्ट्र लगायत अन्तराष्ट्रिय जगतमा कोभिडको केसहरु बढ्दो क्रममा छन् । खुल्ला सिमाना सगैँ दसैँका लागि भित्रने यात्रुहरुको उचित ब्यवस्थापन हुन नसक्दा कोभिडको तेस्रो लहर जनसमुदाय स्तरमै फैलने जोखिम उच्च देखिन्छ ।
सर्बसाधारणहरु दसैँको किनमेलमा तल्लिन रहदा कतिपयले सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड समेत पालना नगरी हिडेको देखिन्छ । बजार तथा पसलहरु भरी भराउ छन् । बाटा तथा सागुरा गल्लीहरुमा सर्बसाधारणहरुको चापले पैदल हिड्न समेत मुस्किल छ ।
यस्तो विषम परिस्थिती आई सक्दा पनि सरकार तथा सम्बन्धित निकायले उचित कदम चाल्न सकेका छैनन् । सरकार पुरानै सत्ताको खेलमा तल्लिन छ । सरकार कुर्सी बचाउने र पछार्ने खेलमा लागि रहदा जनताका लागि सोच्ने फुर्सद छैन । न त हामी सगँ पर्याप्त स्रोत र साधनहरु नै छन् । बेलैमा उपायहरु अवलम्बन गर्नु सिवाय अरु बिकल्प छैन तर सरकारको बेवास्ता र सुस्तताले भविश्यमा बिकराल स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न त्यसैले सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन सके भविष्यमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिने देखिन्छ ।
Previous: घर्तीको उपचारमा १२ लाख बढी सहयोग
Next: अठार वर्षदेखि भाडामा यातायात कार्यालय